Mateo 26:1-30 NA-TWI | Biblica
Mateo 26:1-30 NA-TWI
Yesu wiee nsɛm yi ka no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo no se, “Munim sɛ aka nnanu na Twam Afahyɛ no adu, na wobeyi Onipa Ba no ama, na wɔabɔ no asennua mu.”
Saa bere no ara na asɔfo mpanyin ne Yudafo mpanyin bi ahyia mu wɔ ɔsɔfo panyin Kaiafa fi, retu agyina, ahwehwɛ ɔkwan a wɔbɛfa so akyere Yesu, akum no a obiara renhu akyi. Nanso, wɔkae se, “Ɛnsɛ sɛ wɔkyere no Twam Afahyɛ no mu, anyɛ saa a, ɛde basabasayɛ bɛba ɔman no mu.”
Afei Yesu kɔɔ Betania, na ɔkɔɔ Simon, ɔkwatani fi. Ɔwɔ hɔ redidi no, ɔbea bi a okita ngo huamhuamhuam bi a ne bo yɛ den yiye toa ma baa hɔ, behwie guu Yesu tirim.
Bere a asuafo no huu eyi no anyɛ wɔn dɛ. Wɔkae se, “Adesɛe yi ase ne dɛn? Anka wobetumi atɔn srade huamhuamhuam yi anya sika bebree de ama ahiafo.”
Yesu huu wɔn adwene, na ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Adɛn na moka nea ɔbea yi yɛɛ yi ho asɛm saa? Wayɛ ade pa ama me. Mo ne ahiafo wɔ ha daa, na me de, me ne mo nni hɔ daa. Wahwie ngo huahuamhuam yi agu me so, de asiesie me nipadua ama me sie. Wɔde nea wayɛ yi bɛkae no daa. Wɔbɛka nea ɔyɛe yi wɔ wiase baabiara a wɔbɛka Asɛmpa no.”
Afei, Yuda Iskariot a ɔyɛ asuafo dumien no mu baako kɔɔ asɔfo mpanyin no nkyɛn, kobisaa wɔn se, “Sɛ miyi Yesu ma mo a, ahe na mode bɛma me?” Wɔmaa no nnwetɛbona aduasa. Efi saa bere no, Yuda hwehwɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ayi no ama wɔn.
Yesu ne n’asuafo adidi a edi akyiri
Twam Afahyɛ da a edi kan no, asuafo no baa Yesu nkyɛn bebisaa no se, “Ɛhe na wopɛ sɛ yɛkodi Twam Afahyɛ no.?”
Ɔbuaa wɔn se, “Monkɔ kurow no mu nkohu ɔpanyin asomasi nka nkyerɛ no se, ‘Yɛn Wura se, ne bere abɛn, na wo fi na ɔne n’asuafo no bedi Twam Afahyɛ no.’ Asuafo no dii nea ɔka kyerɛɛ wɔn no so, yɛɛ Twam Afahyɛ aduan a wobedi wɔ ofi a wonyae no mu.
Eduu anwummere a ɔne Dumien no te adidii no, ɔkae se, “Mo mu baako beyi me ama.”
Asɛm yi maa wɔn werɛ howee yiye, na wofii ase bisabisae mmaako mmaako se, “Awurade, ɛyɛ me anaa?”
Yesu buae se, “Nea medi kan de aduan ama no no, ɔno ne saa onipa no. Ɛsɛ sɛ Onipa Ba no wu sɛnea odiyifo no hyɛɛ ne ho nkɔm no; nanso onipa a obeyi Onipa Ba no ama no, nnue! Sɛ wɔanwo saa onipa no a, anka eye.”
Yuda nso bisaa no se, “Kyerɛkyerɛfo, ɛyɛ me anaa?” Yesu buaa no se, “Yiw.”
Bere a wɔredidi no, Yesu faa abodoo, na ɔhyiraa so bubuu mu, de maa n’asuafo no kae se, “Munnye nni, eyi ne me nipadua.”
Na ɔfaa kuruwa a nsa dɔkɔdɔkɔ wɔ mu, na ɔdaa ase no, ɔde maa wɔn kae se, “Mo nyinaa monnom bi, na eyi ne me mogya a ɛhyɛ Apam Foforo no mu den. Wohwie gu ma nnipa bebree nya bɔne fafiri. Montie nea mereka yi yiye. Merennom saa nsa yi bi bio da, de bɛkɔ akosi da a me ne mo bɛnom bi bio wɔ m’agya Ahenni no mu.”
Na wɔtoo dwom wiei no, wofii adi kɔɔ Ngo Bepɔw no so.